आयो, मातातीर्थ औंसीमा डा. डीआरको आमा गीत : RajdhaniDaily.com
Home Not-to-be-missed आयो, मातातीर्थ औंसीमा डा. डीआरको आमा गीत
काठमाडौं । सम्पूर्ण आमामा समर्पण गर्दै डा. डीआर उपाध्यायले मातातीर्थ औंसीको अवसर पारेर आफ्नो नयाँ विश्व कीर्तिमानी गीत आमा रिलिज गरेका छन् । यो गीतको भिडियोलाई डीआर म्युजिक एन्ड क्रियसनबाट उनले आइतबार रिलिज गरेका हुन् ।
तीन साताअघि मात्र यो गीतले विश्व रेकर्ड बनाएको थियो । यो गीतमा सबैभन्दा बढी पटक आमा शब्दको प्रयोग गरिएको छ । यही प्रयोगका कारण यो गीतले विश्व रेकर्ड बनाएको हो । यो गीतमा १ सय ५ पटक आमा शब्द प्रयोग गरिएको छ । गीतसंगीतमै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डसहित ५२ वटा विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल गीतकारका रूपमा डीआर परिचित छन् ।
त्यसैले आमाको मुख हेर्ने दिन (मातृसम्मान दिवसको)को अवसर पारेर गीतको लिरिकल भिडियो आइतबार मात्र सार्वजनिक गरिएको गीतकार उपाध्यायले राजधानीलाई बताए । यो गीतलाई कृष्ण कार्कीले गाएका छन् । जसमा सागर अधिकारी ‘शरद्’को संगीत रहेको छ । गीतलाई देवेन्द्र नेवाःले संगीत संयोजन गरेका छन् ।
अर्थ राजधानी समाचारदाता - February 22, 2020 0
प्रदेश ३ महेश्वर गौतम - March 24, 2021 0
विदेश राजधानी समाचारदाता - March 5, 2020 0
अर्थ राजधानी समाचारदाता - April 3, 2020 0
विद्युत्मा नयाँ महसुल दर, आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असाध्यै कम विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सुविधा दिने लक्ष्यसहितको नयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महसुल दरलाई सार्वजनिक...
अन्तराष्ट्रिय राजधानी समाचारदाता - March 13, 2020 0
सिड्नी । अष्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पीटर डुटोनलाई पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको समाचारमा जनाइएको छ । उनलाई शुक्रबार बिहान ज्वरोका साथै घाँटीमा समस्या आएपछि जाँच...
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - August 4, 2020 0